Myanmar Timber Merchants Association - About MTMA
History of MTMA
Objective of MTMA
Location of MTMA
Logs Measuring System
About Hardwood & LUS
Non Timber Forest Product (NTFP)
About MFP & TMA
အမှတ် ( )၊ ............................. လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း အပိုဒ် - ၄၆ အရ ပြဌာန်းသော အမည်တင်သွင်းလွှာ
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် လူကြီးရွေးကောက်ပွဲ အမည်တင်သွင်းလွှာ
အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖော်ပြပါရှိသော မဲဆန္ဒရှင်များ စာရင်းဝင်အသင်းသား ( ) ဦးအမည်တို့ကို ယခုနှစ် ဗဟိုအမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဆိုတင်သွင်းပါကြောင်း။
အမည် အသင်းဝင်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် အမည်တင်သွင်းခြင်းခံရသူ၏
အထက်အမည်ပါ အဆိုတင်သွင်းချက်ကို ထောက်ခံပါသည်။
မှတ်ချက်။ မိမိလက်မှတ်များကို ဤအသင်းကြီးမှ ထုတ်ပေးထားသော အသင်းဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် မိမိတို့လက်မှတ်နမူနာများနှင့် ကိုက်ညီရန် အထူးသတိပြုပါ။
အညွှန်း။ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများအပိုဒ်-၄၆အရ အမည်တင်သွင်းလွှာများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များစာရင်းပါ အဆိုတင်သွင်းသူ/ထောက်ခံသူ၏ လက်မှတ်နှင့် ၎င်းတို့၏ အသင်းဝင်အမှတ်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်သာမက အမည်တင်သွင်းခြင်းခံရသူ၏ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်နှင့် ၎င်းတို့၏ အသင်းဝင် အမှတ်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် အသီးသီးပါရှိစေရမည်။
Home About MTMA News & Information Activities Knowledge Bank Photo Gallery Member Suggestion Site Map
29 Min Ye Kyaw Swa Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 951- 214 838, 214 839, 214 840 Email: [email protected] | www.myanmartimberassociation.org
Copyright © 2011 Myanmar Timber Merchants Association. All rights reserved.